Kuverengera kuvhurazve Saudi Arabia yeKushanya nemamiriro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kuverengera kuvhurazve Saudi Arabia yeKushanya nemamiriro
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Saudi Arabia iri kushandira kuvhurazve humambo. Izvi zviri kukonzera kuwanda mukutsvaga kwekambani yekufambisa pamhepo.
Vafambi Vafambisi kuMiddle East neNorth Africa (MENA), vari kugadzirira Saudi Arabia Arabia kumutsirazve kwendege dzenyika dzese.
Sekureva kweSaudi Ministry of Interior, kurambidzwa kwekufamba kuchasimudzwa musi wa17 Chivabvu kune mamwe mapoka uye vashanyi.
Chikuva chikuru chekubhuka, chakaona 52% kuwedzera mukutsvaga kwendege dzenyika dzese uye 59% kuwedzera mukutsvaga kwepasirese epasirese, zvichitevera chiziviso.
Around 25% yevafambi vari kutsvaga kufamba mukati memazuva gumi neshanu eSaudi achitangazve nendege uko kudiwa kwekutsvaga kwenguva ino kwakawedzera ne15% kubvira musi wekuzivisa.
Egypt ndiyo yakakwira pamusoro pezita rekutsvaga kwekuenda kwendege, ichiteverwa nePhilippines, Morocco, Jordan neTurkey Isu takaonawo nzvimbo nyowani dzekuzororo dzichibuda pakutsvaga kwendege seMaldives, Tunisia, Ukraine, Greece, neSri Lanka.
Saudi Arabia inoumba chikamu chakakura cheiyo chikamu chekushanya kuMiddle East. Nyika yanga ichibata denda iri nemazvo, ichidzosera chivimbo kune vafambi.
Vaya vanobvumidzwa kuenda kuSaudi Arabia vanosanganisira vagari vakagashira miviri yekudzivirira mushonga wecoronavirus kana vakapasa mazuva gumi nemana mushure mekutora muyero wekutanga wemushonga pamwe nevanhu vakanaya kubva ku coronavirus, vachipedza vapedza isingasviki mwedzi mitanhatu kubva hutachiona hwavo sekusimbiswa nedata rakaratidzwa paTawakkalna App. Pamusoro pevagari vari pasi pemakore gumi nemasere, chero vachiratidza inishuwarenzi vasati vafamba vakatenderwa neSaudi Central Bank.
Vafambi vanoenda kunze kweSaudi Arabia vanofanirwa kuratidza chitupa chePCR bvunzo kubva kunzvimbo inozivikanwa yekutarisa muHumambo. Pakudzoka munyika, vafambi vanofanirwa kugara kwavo kwemazuva manomwe uye vozoyedza PCR bvunzo pakupera kwevhiki.
Mahotera ari kutungamira kutsvaga kwevafambi vane 58% kukura, kuchiteverwa nedzimba uye mahotera.
Vakatenderedza 68% yevafambi vanotsvaga nendege vari solos, 20% mhuri, uye 12% vakaroora
Saudi Arabia yanga ichitepfenyura nhomba ye COVID-19 kuvagari vayo. Iyo ine imwe yemakesi matsva akaderera pamunhu mudunhu reMENA.
Vafambi vari kunzwa kusimbiswa zvakanyanya uko nhandare uye mahotera ari kudzorera chivimbo mukufamba. Nenhanho dzakasimba dzekudzivirira dzakateverwa uye matanho ezvekuchengetedza anosangana nematanho epamusoro, tinotarisira kugadzikana kwakadzikama kwenzvimbo yekushanya.